Baahin: Axad, Mar 20, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo . Garowe: 40 gabdhood oo ka kala socda gobollada Puntland oo uu u furtay tababar ku saabsan horumarinta hawlaha & adeegyada bulshada. … Badhan: Golaha deegaanka ee degmada Badhan oo la dhaariyey, ka kooban 27 xubnood oo 9 ka mid ahi ay gabdho yihiin; Mawro Fatima J. Jibriil oo aan ka waraysanay tubta loo maray dhismaha golaha deegaanka … Garowe: Dr. C/llahi Cali Warsame, wasiirka caafimaadka ee Puntland oo aan ka waraysanay dib u habaynta xarumaha caafimaad ee gobollada Puntland … Muqdisho: Xil. Cismaan C. Boqorre oo aan ka waraysanay kulamo wadatashi oo Nairobi & Muqdisho ka socda, kuna saabsan aayaha dawlada federaalka ah … – Radio Daljir
Maarso 20, 2011 12:00 b 0
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Tacsi iyo taariikh-nololeedkii Xildhibaan Carrab-buro